allAfrica - Zimbabwe
[New Zimbabwe] THE country's largest telecoms company Econet Wireless Zimbabwe, confirmed Tuesday that the government ordered suspension of the internet across all networks after violent protests against the embattled administration.
[VOA] Security forces in Zimbabwe arrested pastor and political activist Evan Mawarire at his home in the capital Harare Wednesday, as the nationwide anti-government strike entered its third and final day.
[New Zimbabwe] President Emmerson Mnangagwa on Tuesday showed little concern about the deadly unrest back home as he continued his widely criticised state visit to Russia and met counterpart Vladimir Putin in Moscow.
[New Zimbabwe] INFORMATION minister Monica Mutsvangwa minister said Tuesday that three people, including a police officer, died in the protests that started Monday.
[The Conversation Africa] When economically challenged rulers try to run nations, especially fragile ones, they can easily make mistakes.
[News24Wire] Brandishing a poster reading: "The untold suffering of Zimbabweans", a group of around 100 protesters demonstrated outside Zimbabwe's embassy in Pretoria on Wednesday morning.
[New Zimbabwe] Chief Justice Luke Malaba called Monday for "respect of legal processes and decisions", defiantly stating that insulting judges will not set aside court rulings.
[New Zimbabwe] The government has lifted a recruitment freeze on the judicial services in a development that will allow the recruitment of more than 200 addition staff, it has emerged.
'Corruption Cases Must Be Thoroughly Investigated'
[New Zimbabwe] Chief Justice Luke Malaba has called for thorough investigation and expeditious prosecution corruption cases.
[CAJ News] Harare -The beleaguered Zimbabwean government has threatened to expel some diplomatic missions and foreign sponsored non-governmental organisations (NGOs) for allegedly influencing regime change in the country.